DINITRA – Blaogin'i Voniary
“ Mahagaga! F’eto an-tanindrazako aho nefa, tenin’olon-kafa no takina mba ho haiko vao mahazo anjara asa hamelomako ankohonana…” Vahiny P.143
Famintinana: Tononkalo nosoratan’ i Rado nanomboka ny taona 1943 ka hatramin’ny taona 1972 no natambatra ao anatin’ny “Dinitra”. Anisany nanamarika ny vanim-potoana mitady ny very sy ny saritsarim-pahaleovantena ity amboaran-tononkalo ity. Hita ao ireo tononkalo malaza ary kaloin’ny mpihira Malagasy maro hatramin’izao toy ny : “Raha mbola misy”, “Maty” sy ny hafa koa. Tanisainy ao ny fahoriana, ny fijaliana, ny adim-piainana. Ventesiny ao koa anefa ny hafaliana sy ny fitiavana. Fa anisan’ny nampikoriana be indrindra ny ranomaintiny ny fitiavan-tanindrazana sy ny tolona ho an’ny fahafahana. Tsy mahagaga raha nantsoina hoe poetin’ny fahafahana i Rado.
“Tiako ianao, lalaiko loatra! Ny momba anao sy ny forongony horaketin’ito foko amin’ilay vilany nongony… Ka ny satanao rehetra sy ny zony no andrianiko ny hevitra napetrako hozohiko sy antoniko Ka na firy refin’andro hany sisa holalovako, ahy ianao, ry tenin-drazako, ary hijanona ho lovako.” Ry tenin-drazako P. 17
boky dinitra, Dinitra rado, famintinana dinitra, hividy boky dinitra, mitady ny very, rado mpanoratra, sarintsarim-pahaleovantena, tara-kevitra dinitra rado, tara-kevitra rado, tononkalo rado